Home News Kheeyre oo Xildhibaan C/laahi Maxamed Nuur Uga Ashtakooday Beesha Mudulood ka...
Kheeyre oo Xildhibaan C/laahi Maxamed Nuur Uga Ashtakooday Beesha Mudulood ka dib Weerar shalay Lagu qaaday oo uu diiday in!!
Magaalada Muqdisho waxaa illaa shalay galab ka taagneyd xiisad iyo hadal heyn ka dhalatay xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur oo gaari uu la socday ciidamo ka tirsan Nabad sugidu ku rasaaseeyeen bar control oo ku taalla degmada C/casiis ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur oo ah Guddoomiyaha Kutlada Baarlamanka ee Horu-socod ayaa Xildhibaanka ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil, ka dib markii gaarigii uu saarnaa ay rasaas ku fureen Ciidamada Nabadsugida, isagoo falkaas ku eedeeyey iney ka dambeeyeen madaxda sare ee dowlada.
Sidoo kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mucaaradsan dowlada ayaa si kulul u cambaareeyey falkan, iyagoo sheegay inuu qeyb ka yahay qorshe dowladu kaga taqaluseyso xubnaha mucaaradsan.
Raisul Wasaare Somalia Xasan Cali Kheyre oo isku dayaya inuu xaalada qaboojiyo ayaa wasiirkiisa aminga Maxamed Abuukar Islow faray inuu baaritaan ku sameeyo dhacdadan hase ahaatee Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur ayaa ku gacan seyray in wasiir u shaqeeya Khayre loo xilsaaro baaritaanka.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Raisul wasaare Khayre uu iskugu yeeray odayaasha beesha Mudulood gaar ahaan jufada uu ka dhashay Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur si ay uga qeyb qaataan dejinta xiisadan.
Xukuumada Raisul Wasaare Khayre oo mudadii ay jirtay ku caan baxday iney mar kasta lugaha la gasho dhiiqo siyaasadeed ayey dhacdadan ku noqotay mid waji gabax ah.
Khayre iyo Xukuumada uu hogaamiyo ayaa horey u galay qaladaad badan oo sababay culeysyo siyaasadeed iyo xiisado khal khal geliyey horumarka hanaanka dowladnimo ee dalka.
Waxaa ka mid ahaa dhacdooyinkaas weerarkii hoyga siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo oo dadkii lagu dilay ay dowladu ka bixisay magdhow lagu qiyaasay 500 oo kun oo dollar.
Dowlada ayaa sidoo kale lacag magdhow ah ku bixisay kiiska sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowlada oo la oran jiray Ciise Jiijiile iyo ilaaladiisa lagu laayay afka hore ee Madaxtooyada waxaana Magdhow ahaan Dowladda ku bixisay kiisaan lacag dhan 60 kun oo dollar.
Dadka u dhuun daloola siyaasada ayaa sheegaya in ujeedada mar kasta khayre iyo Xukuumadiisa ay u abuuraan xiisadaha Siyaasadeed ay tahay iney xukunka ku dheereystaan si indhaha dadka looga mashquuliyo dhaliilaha ay leedadahay dowlada